isina-yakarukwa machira ekugadzira mutsara
segment-pie bi-component fiber, iri mhando yemakemikari faibha yechinyakare yakarukwa machira, anoshandiswa zvakanyanya kuchipfeko. Icho chinodikanwa chemhando kune spinneret chichava chakakwirira pane iyo inoshandiswa kune isina-yakarukwa machira. chikamu-pie spinneret isu takagadzira yawana mhinduro yakanaka kubva kumusika, uye yakatengeswa kumaodzanyemba-kumabvazuva kweasia.
sheath-core bi-component fiber, iri mhando yemakemikari faibha yechinyakare yakarukwa machira, anoshandiswa zvakanyanya kuchipfeko. Iyo mhando inodikanwa kune spinneret ichave yakakwirira kupfuura iyo inoshandiswa kune isina-yakarukwa machira. iyo sheath-yepakati mhando spinneret yatakagadzira yawana mhinduro yakanaka kubva kumusika, uye yakatengeswa kumaodzanyemba-kumabvazuva kweasia.
spandex, iri mhando yemakemikari faibha yechinyakare yakarukwa machira, anoshandiswa zvakanyanya kuchipfeko. Iyo mhando inodikanwa kune iyo spinneret ichave yakakwirira kupfuura iyo yakashandiswa kune isina-yakarukwa machira. iyo spandex spinneret yatakaburitsa yawana mhinduro yakanaka kubva musika, uye ukatengeswa kumaodzanyemba-kumabvazuva kweasia.
spinneret detector, inoumbwa neakakwira simba maikorosikopu uye LCD.sekufamba kwenguva, iyo ultra micro hole inogona kuvharwa nechinhu chisina kuchena, nenzira iyoyo mhando yemakemikari fiber inozokanganiswa, kuitira kusimudzira fiber mhando, spinneret inogona kuonekwa zvisina kujairika.
musoro wakarukwa, unonziwo kutenderera bhokisi, rakagadzirwa neshinda yakaburitswa inogadzira, jira rehupamhi rinogona kuitwa kubva pa160cm kusvika ku320cm, kusangana nemhando dzakasiyana dzezvinodiwa, zvakagadzirwa nekukwikwidza SUS630 kana SUS431, zvinhu zvakasungunuka nemafuta anopisa kana hita yemagetsi zvobva zvapinda musoro, ndokusundidzirwa mukati mespineret kuburikidza nemipopu yemhepo.
spunbonded spinneret, ine ingangoita zviuru gumi zveyakakomberedzwa ultra micro hole, yakagadzirwa nekugadzira SUS630 kana SUS431, inokwanisa kuburitsa jira iro hupamhi kubva 1600-3200mm, dhayamita inogona kuitwa kubva pa0.25-0.5mm, L / D kubva pa1: 10-1: 15. inosungira kumusoro wakarukwa, yakanyungudutswa zvinhu zvichibva kumusoro uye ipapo nepombi yemhepo uye muparidzi, wozopinda mu spinneret, kusvika kumakemikari fiber.it inofanirwa kucheneswa mazuva ese makumi mana kusvika kumazuva makumi matanhatu.
gungwa-chitsuwa fiber, iri mhando yemakemikari faera yechinyakare yakarukwa machira, anoshandiswa zvakanyanya kuchipfeko.Iyo mhando inodikanwa kune iyo spinneret ichave yakakwirira kupfuura iyo spinneret inoshandiswa kune isina-yakarukwa machira. yegungwa-chitsuwa spinneret yatakaburitsa ine akawana mhinduro yakanaka kubva kumusika, uye yakatengeswa kumaodzanyemba-kumabvazuva kweasia.
200mesh-400mesh (75um-38um), tsika. Inobatirira pakati peye extruder uye musoro, chinhu chisina kuchena chinogona kusefetwa usati waenda kumusoro, unokwanisa kuchengetedza spinneret & kugadzirisa effiency & kugadzirisa iwo mucheka mhando
isina-rakarukwa jira yekugadzira mutsara, ine feeder / extruder / firita / metering mapombi / hita / kufa musoro / spinneret / yakajairwa bhokisi / drafter / diffuser / electret kurapwa / kubvisa yemhando dzakasiyana dzeasina kurukwa machira (machira S, machira M, machira eSMS, machira SMMS), anoshandiswa zvakanyanya mukusefa / kuparadzanisa / indasitiri yekudzivirira yekurapa.
isina-yakarukwa jira, hupamhi hunogona kuitwa kubva pa 27cm kusvika ku 320cm, kunyanya iyo yakanyungudika jira, ndiyo yepakati technic yekudzivirira kwekurapa uye kusefa indasitiri.hunhu hweiyo isina-yakarukwa jira inoenderana neakanaka mhando yezvinhu uye yakanaka mhando yekugadzira mutsara .
yakanyungudika yakaputirwa spinneret, ine zviuru zve yakakomberedzwa ultra micro hole, yakagadzirwa nekugadzira SUS630 kana SUS431, inokwanisa kuburitsa jira iro hupamhi kubva 270-3200mm, dhayamita inogona kuitwa kubva pa0.0-0.25mm, L / D kubva pa1: 10- 1:20. inonamira kune yakanyungudika musoro, yakanyungudutswa zvinhu zvichibva kumusoro uye zvadaro nemudenga wemhepo uye muparidzi, wozopinda mu spinneret, kusvika kune chemakemikari fiber.it inofanirwa kucheneswa mazuva ese makumi mana kusvika kumazuva makumi matanhatu.
hanger mhando inonyungudika inopeperetswa musoro, yakagadzirirwa melt inoputika jira kugadzira, jira upamhi rinogona kuitwa kubva 27cm kusvika 320cm, kusangana nemhando dzakasiyana dzezvinodiwa, zvakagadzirwa nekukwikwidza SUS630 kana SUS431, zvinhu zvakasungunuka nemafuta anopisa kana hita yemagetsi zvobva zvapinda mumusoro, ndokusundidzirwa mukati mesipinereti kuburikidza nepombi dzemhepo.
P Non Non dzakarukwa Fabric Production Line, Pp Disc Filter, Pp Nyungudika Yakapepereswa Sefa, Kugadzirwa Kwekugadzira Isina-Yakarukwa Jira, Asina-Yakarukwa Micheka, Isina-Yakarukwa Jira Nyaya, Zvese Zvigadzirwa